စာရေးဆရာ ဟိန်းလတ် ၏စာအုပ် မြောက်ကိုရီးယားသံရုံးမှ ပြန်လည်သိမ်းယူသွားခဲ့ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » စာရေးဆရာ ဟိန်းလတ် ၏စာအုပ် မြောက်ကိုရီးယားသံရုံးမှ ပြန်လည်သိမ်းယူသွားခဲ့
စာရေးဆရာ ဟိန်းလတ် ၏စာအုပ် မြောက်ကိုရီးယားသံရုံးမှ ပြန်လည်သိမ်းယူသွားခဲ့
Posted by True Faith on Aug 5, 2010 in Myanma News | 1 comment
ဒီသတင်းကို ပြည်ပမီဒီယာတွေမှာ ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်ကတည်းက တွေ့နေခဲ့တာပါ။ ဒီနေ့တော့ ပြည်တွင်းက အလဲဗင်းမှာ သတင်းတင်ထားတာတွေ့လို့ တင်ပေးလိုက်တာပါ။ အလဲဗင်းရဲ့ သတ္တိကိုတော့ ချီးကျူးပါတယ်။ ဘာကြောင့်ဆိုတော့ ပြည်တွင်းမီဒီယာတခုအနေနဲ့ ဒါမျိုးသတင်းက မစားမတော် တလုပ် ဖြစ်တတ်တယ်လေ။
ဘာသာပြန် စာရေးဆရာ ဟိန်းလတ်ပြုစုထားသော မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင် ကင်မ်ဂျုံအီအကြောင်း ရေးသားထားသည့် စာအုပ်၏အရောင်းလက်ကျန်အုပ် ရေ ၃၁၀အုပ်ကို မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြောက်ကိုရီးယားသံရုံးမှ ပြန် လည် သိမ်းယူသွားခဲ့ကြောင်း စာရေးဆရာဟိန်းလတ်မှ အတည်ပြု ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
“စာအုပ်တွေကို မြောက်ကိုရီးယားသံရုံးက သိမ်းသွားတယ်ဆိုတာ ဟုတ်ပါတယ်။ သိမ်းသွားပြီးတဲ့နောက် မီးရှို့ပစ်လား၊ ဘာလုပ်ပစ်လဲဆိုတာကိုတော့ ကျွန်တော် မသိပါဘူး။ စာအုပ်အရေအတွက် စုစုပေါင်းကတော့ အုပ်ရေ ၃၁၀ ဖြစ်ပါတယ်။ တန်ဖိုးအားဖြင့်တော့ ငွေကျပ် ၁၂သိန်း ၄သောင်း တန်ဖိုးရှိပါတယ်”ဟု ဆရာဟိန်းလတ် မှ ပြောပြခဲ့ပါသည်။
စာအုပ်များကို ပြန်လည်သိမ်းယူမည် ဖြစ်သည့်အကြောင်း နှင့် ဈေးကွက်အတွင်းရှိနေသော လက်ကျန်စာအုပ်များကို စုစည်းပေးထားရန် မြောက်ကိုရီးယားသံ ရုံးမှ တာဝန်ရှိသူများက ဆရာဟိန်းလတ် ထံသို့ ဇူလိုင်လ ပထမ ပတ်အတွင်းက အကြောင်းကြားခဲ့ကြောင်း၊ ထို့အတွက်ကြောင့် ဈေးကွက်အတွင်းရှိ အရောင်းလက်ကျန် စာအုပ်များကို စုစည်းခဲ့ရာ အုပ်ရေ ၃၁၀အုပ်ရရှိခဲ့ကြောင်း၊ ထိုလက်ကျန် စာအုပ်များကို ဇူလိုင်လ ၅ရက်နေ့တွင် မြောက်ကိုရီး ယားသံရုံးမှ တာဝန်ရှိသူများက လာရောက်သိမ်းယူသွားခဲ့ကြောင်း နှင့် ထိုသို့လာရောက်သိမ်းယူသွားပြီး နောက်ပိုင်းကိစ္စရပ်များကို မသိရှိတော့ကြောင်း ဆရာဟိန်းလတ် က ပြောပြပါသည်။
မြောက်ကိုရီးယား သံရုံးမှ သိမ်းဆည်းခဲ့သည့် ကင်မ်ဂျုံအီးလ်စာအုပ်။ (ဟိန်းလတ် ဘာသာပြန်သည်။)
ဆရာဟိန်းလတ်ပြုစုခဲ့သော ကင်မ်ဂျုံအီ(သို့မဟုတ်) မြောက်ကိုရီးယား၏ ချစ်လှစွာသောခေါင်းဆောင်ကြီး စာအုပ်ကို The Book House စာအုပ်တိုက်မှ စာမူခွင့်ပြု ချက်အမှတ် ၃၁၀၁၁၀၁၀၀၉ဖြင့် အုပ်ရေ ၂၀၀၀ရိုက်နှိပ်ကာ စာအုပ် ရောင်းဈေး ကျပ် ၄၀၀၀သတ်မှတ် ပြီးရောင်းချခဲ့ပါသည်။ ထိုစာအုပ်ကို ပြည်တွင်းစာအုပ်ဈေးကွက်သို့ မေလအတွင်းက တရားဝင် ဖြန့်ချိထားပါသည်။
“စာပေစိစစ်ရေးကနေ တရားဝင်ထုတ်ဝေခွင့် ရရှိပြီးမှ စာအုပ်ကို ဖြန်ချိခဲ့တာပါ။ စာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့ အချက်အလက်အချို့ကို သဘောမကျတဲ့အတွက် စာအုပ်ကို ပြန်သိမ်းတာလို့ သိရပါတယ်။ စာအုပ်မှာ အဓိကကိုးကားခဲ့တဲ့ အ မေရိကန် စာရေးဆရာနှစ်ယောက် ရဲ့ စာအုပ်တွေကိုလည်း သူတို့သဘောမကျခဲ့တာ ဖြစ်ပါမယ်”ဟု ဆရာဟိန်းလတ်က ပြောပါသည်။
ကင်မ်ဂျုံအီအကြောင်း မြန်မာဘာသာပြန် ရေးသားရန်အတွက် ဆရာဟိန်းလတ်သည် အမေရိကန်စာရေးဆရာများ ဖြစ်သည့် စာရေးဆရာ Jasper Becker ရေးသားသော Kim Jong IL and North Korea စာအုပ်နှင့် စာရေး ဆရာ Bradley K Martin ရေးသားသော Under The Loving Care of the Fatherly Leader စာအုပ်တို့ကို အဓိကထား ကိုးကားခဲ့ပါသည်။ ထိုစာအုပ်နှစ်အုပ်အပြင် မြောက်ကိုရီးယား၌ ထုတ်ဝေထားသော စာအုပ်၊စာစောင်များအပါ အပါအ၀င် ကိုးကားစာအုပ်စာတမ်း ၁၅အုပ်ကို မြန်မာပြန်စာအုပ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သည်။
“စာအုပ်တစ်အုပ်တည်းက အချက်အလက်တွေကို တိုက်ရိုက် ဘာသာပြန်တာမဟုတ်ပဲ စာအုပ်၊ စာတမ်းများစွာကို ဖတ်ရှုပြီးဘာသာပြန်တဲ့အတွက် ဆွမ်းဆန်ထဲ ကြွက်ချေးရောသွားတဲ့ သဘောမျိုး ရှိသွားတတ်ပါတယ်။ တစ်ခါ တလေမှာတော့ စာရေးဆရာ အနုပညာသမားဆိုတာ အဖြူကို ပို ကြွစေဖို့ အနက်သုံးရတာတွေရှိ တတ်ပါတယ်။ စာအုပ်မှာ ဘာအချက်အလက်တွေကို သူတို့မကြိုက်သလဲ ဆိုတာတော့ ကျွန်တော်လည်း သေချာမသိပါဘူး။ ဥပမာအားဖြင့် ခေါင်းဆောင်ကြီးဟာ အများရှေ့မှာတော့ ဆန်ပြုတ်သောက်ပြပြီး နောက်ကွယ်မှာတော့ အစားကောင်းတွေ စားတတ်တယ် ဆိုတာမျိုးထည့်ရေးတာကို သူတို့က သဘောမကျဘူးထင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခန်း(၂)မှာပါ တဲ့ ကိုရီးယားစစ်ပွဲအကြောင်းကတော့ မြောက်ကိုရီးယားက ထုတ်ထားတဲ့ စာအုပ်စာတမ်းတွေကနေ ပြန်ဆိုရေးသားခဲ့တာပါ။ ဒါမျိုးကိုတော့ မကြိုက်တာမရှိနိုင်ပါဘူး”ဟု ဆရာဟိန်းလတ်က ဆိုပါသည်။
ထို့အပြင် ယင်းစာအုပ် ရေးသားပြီးနောက် တည်းဖြတ်ရန်အတွက် မြောက်ကိုရီးယားသို့ ပေးပို့ ရသည်ဆိုသော သတင်းများမှာလည်း မှန်ကန်မှုမရှိကြောင်း၊ စာအုပ်ရေးသားနေကြောင်း သိရှိသောအချိန်က မြောက်ကိုရီးယားသံရုံးမှ တာဝန်ရှိသူများက၀မ်းသာကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည့် အပြင် ပြုံယမ်းတွင် ထုတ်ဝေထားသော စာအုပ်စာတမ်းများပင် ပေးပို့ခဲ့ကြောင်း ဆရာဟိန်းလတ်မှ ပြောပြခဲ့ပါသည်။
ယခုကဲ့သို့သော အငြင်းပွားဖွယ်ရာများ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ခြင်းကြောင့် စာအုပ်ရေးသားစဉ်ကပင် သတိထားရေးသားခဲ့ကြောင်းကိုလည်း ဆရာဟိန်းလတ်က ယခုကဲ့သို့ ပြောကြားပါသည်။
“တောင်ကိုရီးယားက ထုတ်တဲ့စာအုပ်တွေကိုဆို တစ်အုပ်မှ မကိုးကားခဲ့ဘူး။ အကောင်းဘက်က ရေးခဲ့တာတွေပဲ များပါတယ်။ သူတို့ဘာတွေ သဘောကျလဲ၊ မကျဘူးလဲဆိုတာတော့ ကျွန်တော်လည်း အသေးစိတ်မသိနိုင်ဘူး လေ။ ကျွန်တော်က မြန်မာဖြစ်နေတာကိုး။ ဒါပေမယ့် ရေးတဲ့အခါ မှာ သတိထားပြီးရေးခဲ့ပါတယ်။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင် ကျွန်တော်က အမေရိကန်ထက် မြောက်ကိုရီးယားကို ပိုသဘောကျတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ဒီစာအုပ်ကိုပြုစု ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ စာအုပ်တွေပြန်သိမ်းသွားတော့ ကိုယ့်ချစ်သူကို သူများခေါ်သွားသလို ခံစားမိပါတယ်။ ဘာလို့ ပြန်ပေးလိုက်သလဲ ဆိုရင်တော့ အကျယ်အကျယ်ကိစ္စတွေ ထပ်မဖြစ်ချင်တော့လို့ပါ”ဟု ဆရာဟိန်းလတ် က ပြောပြခဲ့ပါသည်။ ” ဒါကမဖြစ်သင့်တဲ့ကိစ္စပါပဲ။ သိမ်းယူခွင့်မရှိပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့သာ ထုတ်ဝေသူဆိုရင် မပေးနိုင်ပါဘူး။ ဒါမြန်မာလူမျိုးတွေဖတ်ဖို့ ရေးထားတာပဲ။ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ စာပေလွတ်လပ်ခွင့် အတော်အသင့် ရှိကြောင်း ပြတာပဲ။ သံရုံးအနေနဲ့ ဒီစာအုပ်ဖိုး ပြန်ပေးသင့်တယ်”ဟု Eleven Media Group တာဝန်ရှိသူတစ်ဦး ကဆိုပါသည်။
“ဒီလိုစာအုပ်မျိုးကို ပြန်သိမ်းတယ်ဆိုတာက မဖြစ်သင့်ပါဘူး။ ဆရာအနေနဲ့ကတော့ ကန့်ကွက်ပါတယ်။ သံရုံးတစ်ခုက စာရေးဆရာတစ်ယောက် လွတ်လပ်စွာ ရေးသားထားတဲ့စာအုပ်ကို အတင်းယူပြီး သိမ်းတယ်ဆိုတာ စာရေး ဆရာရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ကို ထိပါးရာရောက်သလို နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကိုလည်း ထိပါးစော်ကားရာ ရောက်ပါတယ်။ စာရေးသူအနေနဲ့လည်း ဒီကိစ္စအပေါ်မှာ တရားဥပဒေကြောင်းအရ ပြန်လည်တုံ့ပြန်သင့်ပါတယ်။ ဆရာကတော့ ဒီဖြစ်ရပ်ကို လက်မခံနိုင်ပါဘူး”ဟု ဆရာလူထုစိန်ဝင်းက ဆိုပါသည်။
ဆရာဟိန်းလတ် အနေဖြင့် မကြာသေးမီကာလများအတွင်း က မော်စီတုန်း နတ်သိကြားမဟုတ် ဟု အမည်ပေးထားသော တရုတ်ကွန်မြူနစ် ခေါင်းဆောင်ကြီး မော်စီတုန်းအကြောင်းစာအုပ်၊ တရုတ်ခေါင်းဆောင် တိန့်ရှောင်ဖိန် အကြောင်းစာအုပ်၊ အီရန်သမ္မတ အမာဒီနီဂျက် အကြောင်း ရေးသားထားသော သမ္မတအမာဒီနီဂျက် နှင့် နျူးကလီးယားအီရန် အကြောင်း အစရှိသည့်စာအုပ်များ အပြင် အိုဘားမား အထ္တုပ္ပတ္တိစာအုပ်များကိုလည်း ရေးသားထားခဲ့ပြီး ထိုစာအုပ်များနှင့် ပတ်သက်ပြီး တစ်စုံတစ်ရာ ကန့်ကွက်ပြောဆိုမှုများ မရှိခဲ့ကြောင်း သိရပါသည်။
“အခုဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်က ကျွန်တော့်အတွက်ဆိုရင် ပထမဆုံးအကြိမ်ပါပဲ။ မြန်မာစာပေလောက အတွက်ဆိုရင်လည်း ဒါပထမဆုံးပါပဲ။ ကျွန်တော်ကတော့ ဒီလိုဘာသာရပ်မျိုးစာအုပ်တွေ ဆက်ရေးသွားမှာပါ။ နိုင်ငံတိုင်းမှာ ဒီလိုသ ဘော မရှိတဲ့အတွက် ဆက်ရေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်”ဟု ဆရာဟိန်းလတ်က ပြောပြခဲ့ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ကိုရီးယားဒီမိုကရက်တစ် ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ (မြောက်ကိုရီးယား)တို့သည် ၂၀၀၇ခုနှစ်အတွင်းက သံတမန် ဆက်သွယ်ရေး ပြန်လည်ထူထောင်ခဲ့ပါသည်။ ပြီးခဲ့သည့် ရက်ပိုင်းအတွင်းကလည်း မြောက်ကိုရီး ယား နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးသည် မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်ခဲ့သည်။
ဆရာဟိန်းလတ် မြန်မာဘာသာသို့ ပြန်ဆိုခဲ့သော ကင်မ်ဂျုံအီစာအုပ်သည် မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံနှင့် ပတ်သက်ပြီး ပြည်တွင်းစာအုပ်ဈေးကွက်၌ ရှားပါးစွာထွက်ရှိလာသည့် စာအုပ်ဖြစ်သည့်အပြင် ကင်မ်ဂျုံအီအကြောင်း ပထမဆုံး ရေးသားထားသည့် မြန်မာပြန်စာအုပ်လည်း ဖြစ်ပါသည်။
ဆရာဟိန်းလတ်သည် ၁၉၇၇ခုနှစ် အချိန်ကတည်း ကပင် ငမဲအမည်ရှိသော နိုင်ငံရေးနောက်ခံ အထ္ထုပ္ပတ္တိစာအုပ်ကို ဘာသာပြန်စာအုပ်ကို စတင်ပြုစုထားကာ နိုင်ငံရေးနောက်ခံ အထ္ထုပ္ပတ္တိစာအုပ် များစွာ ဘာသာပြန် ပြုစုထားသူ ဖြစ်ပါသည်။
why did he let monkey Koreans seize his books without chargingapenny? I think there is something hidden in this story. We can teach U Hein Latt Burmese boxing to fight back Korean taekwando.